Akụkọ - Ahịa ahịa maka gloves nwere ike iwepu
A na-ekewa gloves n'ime ebe anọ; nlekọta ahụike, mkpuchi ọrụ mkpuchi ụlọ ọrụ, ezinụlọ na ụlọ ahịa na ụlọ ahịa na ụlọ ọrụ ọrụ. N'ime ha, ogwe aka na ahụ ike gụpụtara 62% nke mkpokọta oriri.
Dị ka akụkọ nke European Center for Disease Control and Prevention na October 21, 2020, iji gloves chọrọ ndị ọrụ ahụike ọ bụla ka ha gbanwee otu uwe aka mgbe ọ bụla ha zutere ndị ọrịa dị iche iche (ọ bụrụ na enweghị ọnọdụ, ha ọ dị mkpa ka e jiri ọgwụ nje mee ka ọ dị ọcha).
Ọchịchọ ọrịa a na-ebute arịwanye elu nke ukwuu, ihe a na-achọkarị bụ okpukpu abụọ tupu ọrịa ahụ. Ihe mkpuchi okpueze ọhụrụ nke US chọrọ ịrị elu na ojiji nke mkpofu mkpuchi. Karịsịa, ịkpọtụrụ ndị ọrịa na-arịa ọrịa na ICU kwa ụbọchị chọrọ 170 * 2 = 340. .
Mgbe ntiwapụ ahụ gasịrị, ọchịchọ sistemụ ahụike nke United States maka gloves nitrile amụbawo site na ihe dị ka ijeri 2.65 kwa ọnwa tupu ntiwapụ ahụ ruo ihe dịka ijeri 10 kwa ọnwa (ewepu oriri nkịtị), nke karịrị okpukpu atọ mbụ. N'ime ha, ọchịchọ maka ụlọ ọgwụ ọkụ erutela ihe karịrị ijeri 4 kwa ọnwa. Ugboro abụọ nke ọrịa ahụ na njedebe nke ọnwa November dị njọ karị.
N'oge ntiwapụ ahụ, ojiji nke gloves na ụlọ ọgwụ mụbara site na 2-3 ugboro. Ihe kpatara oke mmụba nke ụlọ ọgwụ nwere ike ịbụ igbochi ọrịa na-ebute ọrịa. Ugbu a ojiji nke otu nọọsụ bụ 3-4 ugboro dị ka ọ dị na mbụ.
N'ebe a na-ekpofu roba roba, mmepụta kwa afọ nke 296 ijeri na 2019, nke 180 ijeri na Malaysia bụ naanị 63% nke òkè ahịa, ebe China na-ewepụta ihe dịka ijeri 25 ijeri nitrile na ụfọdụ glos latex gloves, na-aza maka 10%. Agbanyeghị, ọ bụrụ na agbakọtara dịka uwe aka mkpofu 495 nke ụwa na 2019, China ka kwesịrị itinye 80 ijeri PVC mmepụta na ụdị ndị ọzọ a na-ekpofu uwe dịka PE / TPE, na oke China bụ ihe dịka 20-40%.
N'oge oria a, ochicho nke uwe aka nwere ike iwepu amalitela n'ike n'ike. Iji luso oria a agha, obodo o bula kwesiri ibubata otutu ihe mgbochi oria a. Uwe a na-ekpofu ekpofu so na ha. Agbanyeghị, n'ihi mmetụta nke ọrịa a, nnyefe nke onye nrụpụta mbụ ahụ siri ike ma mbufe siri ike karị. Ya mere, ọtụtụ ndị ọchụnta ego chọrọ ugbu a iwupụta pọịtị nitrile / latex / PVC na mba nke ha, ka ha nwee ike ị nweta mkpa aka mpaghara ahụ. Na Chuangmei na-enye ngwa ọrụ nitrile / latex / PVC glove.
Post oge: Jun-28-2021